merolagani - नेपालमा काेराेना संक्रमण पुष्टिमा नयाँ रेकर्ड, एकैदिन संक्रमित हुनेकाे संख्या सात हजार माथि
नेपालमा काेराेना संक्रमण पुष्टिमा नयाँ रेकर्ड, एकैदिन संक्रमित हुनेकाे संख्या सात हजार माथि
May 02, 2021 04:43 PM Merolagani
नेपालमा एकैदिन हालसम्मकै धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । आइतबार देशभरमा सात हजार २११ जनामा कारोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्तालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार २४ घण्टामा भएको कुल १६ हजार ७२३ परीक्षण भएकोमा सो संख्यामा कोरोना पुष्टि भएको हो । सोहि अवधिमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २७ रहेको छ ।
आज थपिएका संक्रमितमध्ये काठमाडौंका दुई हजार ७४४ जना, ललितपुरका ५५० जना र भक्तपुरका ३०१ जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी एक दिनमा नै काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार ५९५ जनामा कोभिड १९ पुष्टि भएकाे छ।
यसैगरी २४ घण्टामा कोरोना मुक्त हुने एक हजार ६१२ जना छन् भने क्वारेन्टिनमा ६७ जना छन् । मन्त्तालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ४८ हजार ७११ रहेको छ । तीमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा तीन हजार ५३० जना र होृम आइसोलेसनमा ४५ हजार १८१ जना छन् । यस्तै आईसीयूमा उपचाररत ४७७ जना र भेन्टिलेटरमा हुने संक्रमितको संख्या १३१ रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन् ।
इन्फिनिटी लघुवित्तको कम्पनी विश्लेषण
May 08, 2021 07:29 PM
यस साता माइक्रोफाइनान्स उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ४.६८ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ। गत साता ५२१८.५२ विन्दुमा बन्द भएको यस उपसमूहको परिसूचक २४३.९८ अंक बढेर ५४६२.५० विन्दुमा बन्द भएको छ।
शनिबार नेपालमा ८,४१८ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ज्यान गुमाउनेको संख्या ५३
May 08, 2021 05:46 PM
यस्ता छन् नेपालमा कम मूल्यमै पाइने उत्कृष्ट स्मार्टफोन, कुनको मूल्य कति?
May 08, 2021 01:57 PM
सातामा एक प्रतिशत बढ्यो नेप्से, कुन उपसमूहको परिसूचक कति बढ्यो?
May 08, 2021 01:40 PM
May 07, 2021 07:30 PM
एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ योजना बाँडफाँट, रिजल्ट यसरी हेर्नुहाेस् ।
May 07, 2021 06:07 PM